Khilaafkii xoogganaa ee u dhaxeeyay madaxweyne Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo xal laga gaaray +(SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Khilaafkii xoogganaa ee u dhaxeeyay madaxweyne Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo...
Khilaafkii xoogganaa ee u dhaxeeyay madaxweyne Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle oo xal laga gaaray +(SAWIRRO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa jiray Khilaaf muddo u dhaxeeyay Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulkaasi Sheekh Cismaan Barre Maxamed.
Khilaafka labadan masuul u dhaxeeyay ayaa ragaadiyay hawlaha Shaqada Baarlamaanka Maamulka Hirshabelle oo muddo fog aysan isugu imaan Baarlamaanka kulamadii sharciga ahaay ee shaqada Hirshabelle.
Madaxweyne Ku xigeenka Maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, ayaa kulan uu isugu keenay hoygiisa Magaalada Muqdisho wuxuu ku xaliyay khilaafkii Waare iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle ka dhaxeeyay.
Mas‘uuliyiin ka tirsan Hirshabelle ayaa Halqaran.com u xaqiijiyay in dhammaan laga heshiiyay waxyaabaha keenay khilaafka.
Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo guddoomiyaha Baarlamaanka Sheekh Cismaan Barre Maxamed, ayaa si wadajir ah u balan qaaday inay u wada shaqeynayaan, islamarkaana horumarka Maamulka Hirshabelle ay u midoobayaan.
Muddooyinkii dambe waxaa si weyn loo hadal haayay Mooshin laga keenaayo guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle, waxaana Mooshinkaasi uu ku saabsanaay Khilaafka Madaxweynaha kala dhaxeeya, balse heshiiskii xalay ayaa meesha ka saaray Mooshinkaasi.
Khilaafka Madaxweyne Waare iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo xal laga gaaray